I-Alexa App yePC - Ungayisebenzisa kanjani Windows 10? - Ungakwenza Kanjani
Ukuba lula kwabasizi be-digital digital kungenye yezinhlobo ezithile. Kunezinketho ezingenakubalwa ezitholakalayo kulo mkhakha, njengoSiri, uCortana, Umsizi weGoogle, ne-Alexa. Kodwa-ke, i-Alexa ye-Amazon ngokungangabazeki isungule i-niche yayo njengomsizi wezwi osezingeni lomhlaba.
Ngakho-ke, i-Amazon itshale imali ekuletheleni i-Alexa App ye-PC. Kulungile! Uhlelo lwakho lwe-Alexa oluthandayo luyatholakala nge-PC ukwengeza isici somsizi ohlakaniphile kukhompyutha yakho.
Ngabe i-Alexa App ikuhlinzekela ini nge-PC?
Isebenza njengohlu lwe-Echo Dot lwe-Amazon. Ngamanye amagama, i-Alexa ikuvumela ukuthi wenze noma yini umsizi angayenza, kepha i-PC. Ikuvumela ukuthi udlulise amehlo ku-inthanethi, usethe ama-alamu noma izikhumbuzi, uthenge ku-inthanethi, nokunye okuningi. I-Alexa ingabhalisa imiyalo yakho kahle futhi ikulethele ukufana okufanayo.
I-Alexa kwi-PC isebenza ngokufana nanoma yisiphi esinye isinqumo esisekelwa yi-Alexa. Ngakho-ke, ungalawula lonke uhlelo lwasekhaya oluhlakaniphile, uma kudingeka. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezinjengamavidiyo, i-Spotify, ne-Pandora azitholakali okwamanje nge-Alexa For PC. Noma kunjalo, inkampani isebenza ekuvuseleleni ukukunikeza lezi zingxoxo.
Uhlelo lokusebenza lwe-Alexa lwe-PC lunokuguquguquka okufanayo nomyalo. Ngakho-ke, ungasebenzisa imiyalo ehlukile njengokuhlola isimo sezulu, ukuthola ihlaya, nokunye okuningi. Unokulawula okugcwele kwe-PC yakho njengedivayisi efanelekile engenazandla. Ukuhambisana nobulula be-Alexa kuyamangaza ngokweqiniso.
Kodwa-ke, kunemikhawulo ethile kulokho i-Alexa engakwenza ku-Windows PC. Akusekeli ukulawula okuphelele kwe-Windows 10. Ngakho-ke, uma ufuna ukuqala imisebenzi eqondene ne-PC, kuzofanele uyenze ngesandla. Lo ngumkhawulo obalulekile. Mhlawumbe iMicrosoft ifuna ukuthi iCortana yabo ibe yindlela yabo yokuhamba. Ukucabanga akucaci. Ngakho-ke, ngenkathi ukhululeka nge-Alexa, kusancishiswa kancane kancane.
Yini Oyidingayo Ngokusebenzisa i-Alexa App ku-PC?
Okokuqala, udinga iWindows 10 ne-PC enemakrofoni. Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi izosebenza kahle kakhulu, kodwa lokho akusona isidingo. Ngemuva kwakho konke, uzosebenzisa imiyalo yezwi ukuze uthole isipiliyoni esingenazandla se-Alexa. Okulandelayo, uzodinga ukuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo ukuze i-Alexa ixhumane nayo. Ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi, i-Alexa ngeke isebenze.
Ngokuhambisanayo, i-Alexa ayitholakali kuma-laptops we-iOS noma we-Mac. Ngakho-ke, uma ungenayo iWindows 10, awukwazi ukusebenzisa i-Alexa kwi-PC yakho. IMac ayinakho ukuxhaswa kwe-Alexa noma yini. Ngakho-ke uma ubheka i-Alexa ye-Mac, ayikho enye inketho etholakalayo okwamanje.
Udinga futhi i-ID ye-Amazon ukuze ungene futhi usebenze ne-Alexa. Ngaphandle kwe-ID ye-Amazon, i-Alexa ngeke isebenze. Ungabhalisa noma usebenzise i-ID osunayo. Uma ufuna ukuthi uhlelo lwakho lwe-smart home luxhumeke, kungcono ukusebenzisa i-ID oyisebenzisa kwamanye amadivayisi.
I-Alexa App ye-PC - Landa futhi ufake Izinyathelo
Ukusetha i-Alexa, okokuqala, kufanele uyifake. Vakashela iMicrosoft Store esemthethweni, ungasebenzisi enye iwebhusayithi. Khumbula, udinga Windows 10 okungenani nemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi ukusebenzisa i-Alexa.
Ungasesha i-Alexa kubha yokusesha ye-Microsoft Store bese uyilanda lapho. Uma usulandiwe, ungafaka i-Alexa ngokulandela inqubo ejwayelekile yokulanda noma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza kwi-PC.
Qalisa uhlelo lokusebenza ngemuva kokufakwa. Manje, uzodinga i-ID ye-Amazon bese ubeka izifakazelo. Uma usuqedile nge-password nokungena ngemvume, kuzoqala nge-Alexa.
Funda imigomo nemibandela ukuze uqonde ukuthi uzifaka kuphi.
Uhlelo lokusebenza luzokucela ukuthi unike amandla imak kanye neminye imvume, ubavumele ngokusho kwesidingo sakho.
Ngesikhathi sokulungiselela, kuzokucela imodi yezandla noma i-push-to-talk. I-hands-free izogcina imakrofoni isebenza ngaso sonke isikhathi, futhi ungasebenzisa umyalo onjenge- 'Hey Alexa' ukuqala umsizi wezwi. Push to talk kuzodinga ukuthi wenze kusebenze i-Alexa ngokucindezela umyalo we-PC bese uyisebenzisa.
Yilokho kuphela okudingekayo ukuze ufake, usethe, futhi wenze kusebenze i-Alexa. Noma kunjalo, kungadingeka ukuthi ugcine uhlelo lokusebenza lwe-Alexa lusebenza ngemuva. Uma ukhethe i-push-to-talk, ungahlala ushintshela kusethingi engenazandla noma kunini lapho uthanda khona.
1Q. Ungazenza Yini Izingcingo Ku-Alexa App Ye-PC?
Iminyaka:Awukwazi ukushaya izingcingo ku-Alexa ye-PC. Kodwa-ke, ungathenga idivayisi ye-Echo ezokusiza ukuthi ushaye izingcingo. Leyo ukuphela kwendlela etholakalayo. Ungaxhuma futhi izipikha ze-Echo ne-PC yakho ngokufinyeleleka okungeziwe. Njengamanje, ayikho inketho yokwenza izingcingo zevidiyo noma zezwi. Kukhona umkhawulo othile kulokho i-Alexa engakwenza ku-PC yakho.
2Q. Ngabe i-Alexa yePC ingayinika amandla uhlelo?
Iminyaka:Uma unohlelo lokuvala ngokuphelele, i-Alexa ngeke ikwazi ukuyivula futhi. Lokho kufana nokucisha amandla kwanoma iyiphi idivayisi. Ngakho-ke, i-Alexa kudivayisi ngeke ikulalele. Kodwa-ke, uma i-PC yakho ikumodi yokulala ngamandla kagesi ahambisanayo, ungasebenzisa i-Alexa ukuvusa i-PC yakho bese uyisebenzisa. Ungahle unikeze ne-password yokuthi iyithayiphe futhi isebenze ngezwi lakho.
3Q. Kungani Usebenzisa i-Alexa Over Cortana?
Iminyaka:Abanye abantu bathanda ukusebenziseka kalula kwe-Alexa nokuxhuma kwayo kulo lonke uhlelo lwekhaya oluhlakaniphile. Uma unamadivayisi amaningi asekhaya ahlakaniphile njengabalandeli, amalambu, ne-Echo, ungahle uthande ukuxhuma i-PC yakho nale nethiwekhi. Yilapho i-Alexa ingakhombisa ukuthi iyimpahla ebaluleke kakhulu kunoCortana. Vele, uCortana usafunda, kanti u-Alexa ukhombisile ukuthi ungumsizi onekhono wezwi. Abanye abantu bathanda i-Alexa ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umsizi.
Yilokho kuphela okudingayo ukusetha i-Alexa App For PC. Akungabazeki ukuthi ilula kepha hhayi uhlelo lokusebenza olunolwazi. Ukuthi kuzoba ne-Alexa yezinhlobo ezindala noma i-Mac kuzobonakala kuyinto engenakwenzeka ukuxoxa ngayo. Sethemba ukuthi lo mhlahlandlela uzokusiza uthole konke okufunayo.
Khumbula, i-Alexa for PC ingumsizi ohlakaniphile ozokwenza umsebenzi othile. Kodwa-ke, kusazodingeka usebenze ngesandla ngemisebenzi egxile kwi-PC. Ngisho noCortana akakwazi ukusekela lapho! Yilokho kuphela!
Amathebulethi ahamba phambili ama-movie wokubuka - asetshenziswa kakhulu (2020)
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili zeKissAnime.ru (100% Ukusebenza)